दुर्गमका संक्रमितलाई कर्णाली सरकारले हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने
३ जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले दुर्गमका कोरोना संक्रमितलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार साँझ बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौगोलिकरुपमा विकट रहेको कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रका संक्रमितलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेशका डोल्पा, मुगु र हुम्लाका जटिल प्रकृतिका संक्रमितलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि, […]
पुनर्बहाली भएका सांसदले दलको ह्वीप मान्नुपर्छ : यामलाल काँडेल
२८ जेठ, सुर्खेत । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएका सांसदहरुले दलको ह्वीप मान्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार बसेको कर्णाली प्रदेश प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै नेता कँडेलले संसदमा सहभागी सदस्यले दलको ह्वीप बमोजिमको आचरणमा बस्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘संसदमा दुईवटा एमाले छैन र हुँदैन, मन लागेको ठाउँमा बस्न पाउने […]
कर्णाली प्रदेश प्रमुख सचिव श्रेष्ठको अनिवार्य अवकाश
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश भएका छन् । जेठ १४ गतेसम्म ३४ वर्ष ६ महिना २४ दिन सेवा गरेको श्रेष्ठ ९ महिनायता कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख सचिवको रूपमा कार्यरत थिए ।
प्रदेश अस्पतालमा संक्रमितलाई बेड छैन, राजनीति छ !
७ जेठ, सुर्खेत । कोरोना महामारीले विकराल रुप लिँदै गर्दा कर्णाली प्रदेश अस्पताल गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले भरिएको छ । आईसीयू–भेन्टिलेटर जस्ता सुविधा त धेरै परको कुरा भइसक्यो, नागरिकले अस्पतालको बरण्डामा बसेर अक्सिजनसमेत पाउन सकेका छैनन् । अक्सिजन अभावकै कारण हरेक दिन मानिसले मृत्युवरण गर्नु परेको छ । अस्पतालमा दैनिकजसो ८० जना भन्दा बढी बिरामी भर्ना […]
सल्यानमा अक्सिजन प्लान्ट खरिदमा अनियमितताको आशंका, लेखा समितिले माग्यो कागजात
५ जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अक्सिजन प्लान्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आशंकामा जिल्ला अस्पताल सल्यानसँग खरिदसम्बन्धी कागजात माग गरेको छ । समितिका सचिव उपेन्द्रकुमार गुरुङका अनुसार ७ दिन भित्र खरिदसम्बन्धी कागजात समितिलाई उपलव्ध गराउन भनिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सल्यान अस्पतालका लागि अक्सिजन प्लान्ट राख्न विनियोजन गरेको बजेटबाट ठेकेदारले आफूखुसी अक्सिजन […]
कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई केन्द्र मातहत नै ल्याउने प्रस्ताव
४ जेठ, सुर्खेत । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहतमा ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ । सोमबार बसेको स्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन केन्द्र (आईसीएस)को बैठकले प्रदेश अस्पताललाई संघअन्तर्गत ल्याउन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो । केन्द्रका प्रमुख डा. समीरकुमार अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, […]
कर्णालीमा थप आठ संक्रमितको मृत्‍यु
४ जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका विभिन्‍न जिल्लाका अस्पतालहरुमा उपचाररत थप आठ जना कोरोना संक्रमितको मृत्‍यु भएको छ । योसँगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १७० पुगेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. रवीन खड्काका अनुसार मृतकमध्ये सुर्खेतका पाँच जना, सल्यानका दुई जना र डोल्पाका एकजना रहेका छन् । […]
सुर्खेतमै अक्सिजन प्लान्टदेखि, बिरामीलाई हेलिकोप्टरबाट उद्वारसम्म
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभर आवश्यक पर्ने अक्सिजन आपूर्ति गर्न अस्क्सिजन प्लान्ट सुर्खेतमै स्थापना गर्ने भएको छ। आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरसका नयाँ भेरियन्टसहितका बिरामीलाई अक्सिजन अनिवार्य भएकोले सुर्खेतमै उत्पादन गर्ने भएको हो।त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले दुर्गमका संक्रमितलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जि
२ जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारलाई गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिएको छ । समितिको शनिबार बसेको बैठकले प्रदेश अस्पताल, सुर्खेतमा दैनिक १ हजार सिलिण्डर भर्न सक्ने अक्सिजन प्लाण्टको तत्काल स्थापना गर्न समेत लिखित निर्देशन दिएको हो । समितीले प्रदेशभर अक्सिजनको अभाव हुन नदिन र अस्पतालहरुमा नियमित विद्युत आपूर्ति […]
२ जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली काँग्रेसले दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान नछाडेपछि ३ मन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित भएको छ । वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसद्मा विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले दुई मन्त्रालयमा दाबी नछाडेपछि नवनियुक्त तीन मन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित भएको हो । मुख्यमन्त्री शाहीको सिफारिसमा शुक्रबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले नवनियुक्त मन्त्रीविनै मन्त्रिपरिषद्को […]
१ जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले जटिल अवस्थाका बिरामीलाई मात्र रिफर गर्न आग्रह गरेको छ । अक्सिजन अभाव देखाउँदै थप बिरामी भर्ना नलिने बताएको अस्पतालले शनिबार अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै जटिल प्रकारका बिरामी भए मात्र अस्पतालमा रिफर गर्न आग्रह गरेको हो । कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले सामान्य संक्रमितलाई स्थानीय तहमै उपचार गर्ने […]
१० वैशाख, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले दुर्गमका कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गर्ने भएको छ । गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितको उपचारमा सहज पहुँच पुर्‍याउन विकट क्षेत्रका लागि हेलिकोप्टर सहितको व्यवस्था गर्ने भएको हो । साथै, सड्क सञ्जाल पुगेको क्षेत्रका लागी भने १० वटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवंम् आर्थिक मामिला तथा […]